अमेरिकाले चीनमाथि लगायो आणविक बम परीक्षण गरेको आरोप ! «
अमेरिकाले चीनमाथि लगायो आणविक बम परीक्षण गरेको आरोप !
Published : 17 April, 2020 8:29 am
अमेरिकाले चीनले परमाणु बम परीक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको हतियार नियन्त्रण, प्रमाणिकरण र अनुपालनसम्बधी एक रिपोर्टमा चीनले कम क्षमताको आणविक बम परीक्षण गरेको उल्लेख गरेको छ । तर चीनले अमेरिकाको यो दावीलाई इन्कार गरेको छ । रिपोर्टमा आणविक हतियार परीक्षणको कुनै प्रमाणित तथ्य भने प्रस्तुत गरिएको छैन । रिपोर्टमा चीनको लोप नुर परीक्षण स्थल र त्यहाँ हुने सैन्य गतिविधिलाई प्रमाणका रुपमा अघि सारिएको छ । वाल स्ट्रीट जर्नलले अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको रिपोर्टलाई हवाला दिँदै चीनको लोप नुर परीक्षण स्थलमा वर्षभर यसको तयारी गरिएको दाबी गरेको हो ।
अमेरिकाले गलत आरोप लगायो : चीन
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अमेरिकाले गलत आरोप लगाएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् । उनले यसलाई झुट आरोपको संज्ञा दिएका छन् । उनले चीन आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध गर्न प्रतिबद्द रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘चीनले जहिले पनि एक जिम्मेवार दृष्टिकोण अप्नाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरु पुरा गर्ने आफ्नो प्रतिज्ञाहरुलाई वफदारीपूर्वक पुरा गर्दै आएको छ । अमेरिकाको दावी पूर्णरुपमा निराधार छ ।’ –दैनिक भाष्करको सहयोगमा